All Ego na Ihe Onwunwe na World gosiri na Physical $100 ụgwọ – infographic
Otu Narị Dollars
$100 – Kasị counterfeited ego ekpemekpe na ụwa. The kasị n'ọtụtụ ebe nchekwa nke bara uru n'ụwa n'ihi na ere ọgwụ ọjọọ. Nọgidere Na-eme ụwa na-akpụ akpụ.
Iri Puku Dollars
$10,000 – Ezuru a oké ezumike ma ọ bụ ịzụta a na-eji ụgbọ ala. Odika otu afọ nke na-arụ ọrụ maka nkezi mmadụ n'ụwa.
Otu Nde Dollar
$1,000,000 – bụ ego square n'ala.
Narị Nde Dollar
$100,000,000 – Plenty to go around for everyone. Dabara omume ọma na ihe ISO / Military ọkọlọtọ sized pallet.
Otu Ijeri Dollars
$1,000,000,000 – Nke a bụ otú a ijeri dollar anya dị ka. 10 pallets nke $100 ụgwọ.
Otu puku ijeri Dollars
$1,000,000,000,000 – Mgbe ha na-atụbakwa gburugburu okwu “puku ijeri” dị ka ọ bụ ihe ọ bụla, this is the realit of $1 puku ijeri dollar. The square nke pallets aka nri bụ $10 ijeri dollar. 100x na na i nwere ulo-elu $1 puku ijeri na bụ 465 ụkwụ ogologo (142 mita).
Gold na Silver niile investments na World
Demonocacy.info ka raara isiokwu niile Gold na niile Silver na World. Nke a bụ obere nchịkọta nke dịtụ obere ego nke ọlaedo na ọlaọcha dị na ụwa maka ulo oru mbo na nzube. Kpọmkwem uru nke niile ego Gold na World bụ $2.5 Puku ijeri USD na $ 40 / gram ma ọ bụ $ 1250 / ounce.
E nwere budata ọzọ silver n'ụwa karịa ọlaedo, ma n'ihi na ọlaọcha multiples dị ọnụ ala karịa gold (erughị $ 20 / oz na 2017), a otutu silver enwetatụbeghị furu efu kemgbe nile. Silver na-eji na ulo oru mmepụta. The ego nke ego ọlaọcha dị ka ọha na eze bụ a ijuanya obere ego. World ọchịchị alala ọ bụla dị ịrịba silver mee, n'adịghị na gold.
The World Money Tụkwasịnụ:
iri abụọ na asatọ – $28 Puku ijeri na Base Money
Fifty – $50 Puku ijeri na Bank Money
Nke a bụ ole na ego bụ na mbara ala. Ọ bụghị ihe niile na-ahụ ego ezie (dị ka e gosiri n'elu), ọtụtụ n'ime ya bụ digital:
Base Money mejupụtara ego ẹkenịmde mmiri (natara n'aka ha Central Banks mgbe Banks rere Government ma ọ bụ ụlọ ọrụ agbụ ha Central Banks, ego dị maka agbazinye onwe oru), ego echekwara na akụ na vaults (anụ ahụ ego) na ego na ndị mmadụ aka. Nke a ego bụghị dị na igwe ndọrọ ego.
Bank Money mejupụtara ego echekwara na mmiri site corporations na ndị mmadụ, maka ndọrọ ego mgbe ọ bụla. Bank Money is also lent out by Banks to people and business’. Banks nwere a kacha nta idobere chọrọ (emekarị 10%) na ha ga-anọgide na-aka. Ọ bụrụ na onye ọ bụla kpebiri ịga igwe ndọrọ ego na sere ihe niile, a ga-enwe a na-agba ọsọ na ụlọ akụ.
Fifty asatọ $58 puku ijeri – Uru nke All na Government nkekọ na World
The ụwa ụmụ amaala na-akwụ mmasị na nke a ukwuu ego n'ihi na nke ji kere ha obodo ọchịchị.
Government nkekọ (ụgwọ) na-atụle ihe “akpan owo klas” n'ihi na nkekọ (tax payers) ịkwụ ụgwọ mmasị na gbaziri ego. The nbinye-akawanye a akwụkwọ (The Bond- a nkwa-akwụ $$$ azụ + mmasị) na nloghachi.
Abụkarị Government nkekọ na-atụle mma investments na obere ihe ize ndụ nke na-abụghị ugwo n'ihi ọchịchị nwere ike ide ọhụrụ iwu (dịkwuo & ike ịsụ Ụtụ Isi) na-ndị mmadụ ego site na ike (dị arọ okwu: nkwado iwu ohi). Ọzọ nhọrọ nke re-ịkwụ ụgwọ, ọ bụghị otú mma investors / lenders bụ nwere na Federal Reserve “ebipụta” ọhụrụ ego, a devalues ​​ndị ịzụta ike nke ego site onu oriri na investors na-akawanye azụ ihe na-erughị ha na-etinye na. Nke a bụ na-emekarị na usoro nke oke maka ọchịchị.
Ya mere oké Government Ụgwọ? N'ihi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'elu-nkwa na ụmụ amaala ha ihe ha nwere ike (BỤGHỊ) anapụta, ha na-eme otú iji nweta ntuli aka. Ozugbo Politicans merie ha gbaziri ego iji kwụọ ụgwọ maka nkwa ha wee na-edebe nkwa. Ọtụtụ mgbe ha gbaziri ka onwe ha ọgaranya na ha crony mmekọ na mpụ.
Otu narị iri na isi $116 puku ijeri – All ndị Ebuka na Corporate nkekọ na World
Ụlọọrụ agbụ ndị yiri Government nkekọ, ma ihe ize ndụ. Ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na-ebu nnọọ nta n'ihe ize ndụ karịa agbazinye ego ndị mmadụ– eziokwu a lowers ize ndụ ma na-akpali ala agbazinye mmasị ọnụego. Big corporations nwere ike ị gbaziri ego pụtara ọnụ ala tụnyere ndị mmadụ n'otu n'otu. Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ gbaziri ego ịzụta azụ ha ngwaahịa na-asọ ngwaahịa uru elu, site otú enriching investors mgbe ego gutting ụlọ ọrụ.
Ebuka-agbanwe nke ukwuu na uru, n'ihi na ha bara uru bụ ihe nkịtị- uru kpebisiri ike site P / E (Price ka enwetakwa) ruru na-atụ anya na ngwaahịa dividend ịkwụ ụgwọ.
Abụọ na narị abụọ na iri itoolu $290 puku ijeri – Uru nke niile Private Business na Real Estate na World
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịzụta ụwa nile, nke a bụ ego ole ị ga-mkpa.
$180 Puku ijeri bụ maka Real Estate
$100 Puku ijeri bụ maka Registered Private Business
$10 Puku ijeri bụ maka Extralegal entities.
Nke a kpọmkwem ikpo nke ego na-nyeere site naanị ya nwe na onwe enterprise site ikeketeorie.
Democratic ikeketeorie-atụle ga-kasị njọ aku usoro tupu ewere a lee anya na uzo ozo. Democratic Capitalism was promoted by the Founding Fathers of USA. Ụfọdụ na-akpọ ndị guzobere Heroes, ugbu ụfọdụ na-akpọ ha “Ohu nwe onye na-achọghị na-akwụ ụtụ isi na UK”. Choice bụ nke gị.
Ụlọọrụ ikeketeorie na-atụle na-achị usoro ke United States ugbu a.
Communist ọchịchị ga-ẹkemụm akara nke ego nile a (Business na Real Estate) na ndabere na ndị ọchịchị maara ihe karịa gị ebe na-etinye ego gị ego, and the government would run all business and own all real estate.
Ndị ụzọ hell na-mgbe meghere na ezi ebumnobi. A fool who thinks he knows is much more dangerous than a fool that knows he knows nothing.
One $1 Quadrillion – Uru nke niile nkwekọrịta na World
Nke a na-egosi na ngụkọta notional uru nke niile nkwekọrịta na World (Cha cha style nzo na nkwekọrịta ụdị, mere mmiri). Nkwekọrịta bụ a dị ize ndụ ọgbaghara. Ha na-atụ ma ma nnọọ adị n'ezie. Nkwekọrịta bụ cha cha style nzo na uru nke ọ bụla ha na-ahọrọ na-nzọ na, na nkwekọrịta ụdị, mere mmiri, họpụtara ọ dịghị onye (n'ihi na ọ dịghị onye o doro anya na-aghọta nwere njikọ chiri anya web & ọgbaghara nke nkwekọrịta).
Buru “ihe” nke bara uru, ka nzo na ọdịnihu uru nke “ihe”, tinye nkwekọrịta & i nwere a emepụta. Banks ka oke uru na nkwekọrịta, na mgbe afụ bursts Ohere bụ-atụ ụtụ isi ga-ejedebe na ụgwọ. Nke a visualizes ngụkọta mkpuchi maka nkwekọrịta (notional). Yiri insurance ụlọ ọrụ si ngụkọta mkpuchi niile ụgbọala (apụtaghị niile insurance na niile ụgbọala ga-akwụ ụgwọ si n'otu oge).
Mgbe ụfọdụ Banks ka onwe-ịkagbu emepụta contracts. atụ: 2x Banks tinye 2x nkwekọrịta:
Contract1 = Bank1 akwụ $ 10m ka Bank2 ma ọ bụrụ na price na-aga
Contract2 = Bank2 akwụ $ 10m ka Bank1 ma ọ bụrụ na price na-aga.
Nke a 1000x na ha wee laa etu ọ bụla ọzọ banyere ha hà emepụta Pọtụfoliyo.
Ọ dịghị onye pụrụ n'ezie soro onye nweta ihe onye na nkwekọrịta, ọ bụ a sara mgbagwoju anya ọgbaghara, ma ihe unannounced omume ndị dị otú ahụ dị ka nri Chairwoman Janet Yellen na mberede na-azụ mmasị ọnụego na 5% ga-o yiri nnọọ ka implode dum emepụta System na Banks tinyere na, n'ihi cascading domino utịp na ụfọdụ akụ kwesiri ga nwere a ọjọọ aka emepụta nzo na-aga odida.
ụfọdụ nzuzu (ma eleghị anya, akụ ọzọ) ga-aka na odida akụ na ebuka na akụ, na-na-eche ihu odida. Nke a ga-eme ka a ọnwụ nke obi ike na anoghi n'ulo oba na onye ọ bụla ga-amalite Anam Udeme ego ha mma-eche ya, na-eme ka a cascading mmetụta nke ụlọ akụ insolvency.
$1 Quadrillion = $1000 puku ijeri = $1 Nde ọtụtụ ijeri ma ọ bụ $1 ijeri Ọtụtụ nde
The liquidity Pyramid e kere visualizing nzukọ nke akpan owo klas na okwu nke ize ndụ ma na size. The liquidity Pyramid e kere n'oge na United States, mgbe ọ bụla dollar e kụziri site Gold. Gold Nleta obere isi nke kasị pụrụ ịdabere na uru, na akpan owo klas na-aga n'ihu n'ihu ọkwa dị elu ndị ọzọ dị ize ndụ. The ibu size of akpan owo klas na ọkwa dị elu bụ nnọchiteanya nke elu ọnụ n'ụwa nile notional uru nke ndị akụ.
Dị ka ego n'ihe ize ndụ na-abawanye, ego nēche ime site ọzọ ize ndụ akụ (nkwekọrịta), na ọ dịghị ihe ọzọ dị ize ndụ akụ (ka anụ ahụ ego na mgbe gold). Ọ dịghị ihe na-enweghị ihe ize ndụ, ma n'ihe ize ndụ bụ ikwu. The nke bụ na e nwere ihe dị nnọọ nta ahụ ego na ọbụna na-erughị Gold tụnyere ndị ọzọ dị ize ndụ akụ, a na-eme maka a mmadụ jupụtara na ahia n'oge elu n'ihe ize ndụ mgbe onye ọ bụla chọrọ na-awụlikwa elu n'ime ego na gold, ịkwa elu price.
The obere odo rektangulu n'aka ekpe n'ihu bụ niile gold ke ererimbot ke ọdịdị ahụ. All na gold na ụwa bụ nile adịghị na “ego ego ọkwa” ụdị.
The $1 Quadrillion nkwekọrịta ego mgbidi ahụ na-akwụsị n'ebe dị anya, n'ihi na $1 Quadrillion bụ ihe ọnu site nke kacha mma na-eme nnyocha na eziokwu na ọ dịghị onye maara n'ezie ezi size nke nkwekọrịta Market.
Kpamkpam mbụ na English ebe a: demonocracy.info